2007-09-05 @ 08:27 in Politika
Mizotra tsimoramora eny na dia tsy misy mpilaza firy aza ankoatra ireo haino aman-jery mpanohana ny fitondrana amin’izao fotoana izao. Mazava loatra fa ny feon’izy ireo irery no mipariaka any anivon’ny sarambambem-bahoaka amin’izay fotoana izay. Misy ihany anefa izay azo ambara momba ity famoriana atao tsikelikely eny amin’ny lapam-panjakana eny Iavoloha ity.
Marihina fa miditra amin’ny andiany fahadimy (farany) omaly ny famoriana ireo sefom-pokontany rehetra manerana an’i Madagasikara ka isaky ny faritra no ampiarahana azy ireo. Ny andiany iray dia misy sefom-pokontany eo amin’ny 3000 eo ho eo. Ny fampivondronana kosa dia miompana amin’ny fomba fitondrana olona ( fitarihana olona kosa no ambara ombieny ombieny entin’ny fampahalalam-baovao ilazany ny leadership).
Voalohany amin’izany ny hevitry ny sasany manao hoe : « naninona raha ny mpampianatra no mitety ny faritra ? » heverina ho fanaovana fampielezan-kevitra ankolaka manko ny itondrana ireo sefom-pokontany ireo mandeha amin’izany hoe lapan’Iavoloha. Misy ny rariny tokoa izay fanamarihana izay satria ny vola lany amin’ny fivahinian’ny mpampiofana no mora kokoa noho ny vola lany ivahinian’ny sefom-pokontany avy amin’ny lafy valo. Vitsy kokoa ny fahasahiranana amin’ny fikarakarana raha ny hamaroan’ny olona karakaraina no jerena.
Zavatra maro anefa no mety mahatonga ny fanapahan-kevitra hanaovana ny famelabelarana eny amin’ny lapam-panjakana eny Iavoloha. Ohatra tonga voalohany dia fanaovan’ny sefom-pokontany fizahantany vita ho azy indrindra ho an’ireo tsy mbola nahita mivantana hatramin’izay izany hoe Antananarivo izany. Fantatra ihany manko ny fomba fisainan’ny olona maro raha misy izay atao hoe tsy mbola nahita ny renivohitra hatramin’izay niainany nefa hoe hitondra olona. Ny fahitana zava-baovao aty andrenivohitra dia mety hampisokatra ny masontsainy amin’ny vina mety hotanterahiny.
Manaraka izany ihany koa dia ilay fidirana ny lapa mihitsy. Omena sehatra tokoa ry zareo, hoy ny fitenenana. Mba hahatsiaro ny zavatra natao azy kosa izy ireo, hoy aho rehefa nandinika. Mba manan-kotantaraina rehefa tsy hita na tsy azo izay tena holazaina tamin’ny fiofanana niantsoana ny tena, ary hahita ireo fampirantiana mampilendalenda momba ny fiompiana sy ny fambolena ary hikarakara momba ny tontolo iainana ihany koa.
Sekoly no ivantanana
Fa ny tsy dia misy mpilaza dia ny toerana ivantanana sy atoriana. Sekolim-panjakana izy ireo ary eto an-drenivohitra mazava loatra. Ny sekoly amin’ny mahasekoly azy izay dia misy ny fahabangana. Tsy misy ny efitra fisasana, indrindra ho an’ny vehivavy, ka voatery namoronana vonjimaika amin’ny rofia na gony plastika fantatsika. Tsizarizary ihany nefa andeha atao hoe aleo io toy izay tsy misy mihitsy. Eto Antananarivo rahateo tsy misy efitra fisasana an’ny Kaominina hatramin’izao aloha na dia fantatra aza fa hikarakara izany izy ireo.
Manaraka izany dia ny efitra fidiovana (azonareo fa ny mahasamihafa ilay efitra fidiovana sy fisasana ? tsy dia tiako loatra ilay teny hoe fivoahana !). tena tsy voahaja mihitsy ny fahadiovana. Ny fahazaran-dratsy any amin’ny misy azy ve no entin’ny sefom-pokontany aty sa misy kosa ny fahihirana mahalany be ? nefa dia mahatonga ny sefom-pokotany aty ihany. Fahabangana na fanadinoana ve ny fanomezana taratasy fidiovana ireo olona tsy zatra izany any amin’ny misy azy ireo nefa tsy dia lafo loatra ireny taratasy ireny ho amin’ny fikarakarana tahaka izao. Tsy mahagaga raha taratasy kahie fa famonosana na gazety no idiovan’ny olona nefa manentsina tatatra fanariana maloto lozantany ireny. Taratasy tsy sahaza manko. Vokany : tsy mandingana ny varavarambe akory dia mampiverina ilalana na dia poritra sahala amin’inona aza.
Na izany na tsy izany dia maneho ny mahaizy azy mihitsy izy ireo. Palitao tonta no mety hiaraka amin’ny pataloha jean sy kapa kiranyl. Ny satroka moa dia mbola mahazatra ny maro mihitsy. Ireo rehetra ireo dia amin’ny fahadiovana antonony. Afaka manoatra ho aiza moa sady aiza koa no hindramana ny tsara kokoa ?